कहाँबाट आयो कक्षा ६ मा पढ्ने यि दुई बालकको खातामा करोडौँ भारु ? त्यो के गरे झनै रोचक ! – Classic Khabar
September 17, 2021 73
जब तपाईंको खातामा अचानक करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन्छ के तपाई गर्नु हुन्छ ? यस्तै एक दुर्लभ घटना भारत, बिहारको खगेरियामा देखिएको छ । त्यहाँ एक युवकको खातामा गल्तीले ८ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै जम्मा भयो । त्यो मात्रै होईन सो रकम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको भन्दै हल्ला पनि फैलाइयो ।
सोही समयमा, एलडीएम एमके मधुकरले यस विषयमा आफु जानकार नभएको बताएका छन् । बैंकबाट जानकारी प्राप्त भएमा यस विषयमा अनुसन्धान गरेर जानकारी गराउने मधुकरले बताएका छन् ।
यस भन्दा पहिले खगरिया जिल्लामा एक धेरै रोचक बाहिर आएको छ । अचानक रञ्जित दासको खातामा झण्डै ९ लाख रुपैयाँ आयो । खातामा पैसा आएपछि उनलाई लाग्यो कि प्रधानमन्त्री मोदीले सो पैसा उनको खातामा पठाएका हुन् ।
उनले त्यो पैसा आफ्नो खाताबाट निकालेर खर्च गर्न थाले । पैसा फिर्ताको लागि बैंकले रणजीत दासलाई धेरै पटक सूचना पठाइसकेको थियो, तर उनले पैसा फिर्ता गर्न मानेनन् । अन्ततः बैंकको तर्फबाट रञ्जित दास विरुद्ध एक एफआईआर दर्ता गरियो । प्रहरीले रञ्जितलाई गिरफ्तार गरेर जेल चलान गरेको थियो ।
Prevदसैं, तिहार पर्वलाईआजबाट खाद्यमा छुट अफर
Nextडिपेन्डेण्टमा युरोप जाने युवा–युवती चाहियो, काठमाडौमा महिलालाई केटा चाहियो (नम्बरसहित)
प्यारि नानि बिनितालाई यसरी कस्ले लैजाने भयो (हेर्नुस् भिडियो )
यसरी दुखद् निधन भयो धर्मराज र उनी श्रीमती पशुपतीको